कन्फेडेरेसन कपको लागि कस्तो छ जर्मनीको टोली? | Hamro Khelkud
कन्फेडेरेसन कपको लागि कस्तो छ जर्मनीको टोली?
एजेन्सी – फिफा कन्फेडेरेसन कप २०१७ शनिबारबाट रसियाको सोचिमा सुरु हुँदैछ। ६ महादेशका च्याम्पियन टोलीसँगै विश्वकप विजेता र आयोजक टोलीले खेल्ने यस प्रतियोगितामा जर्मनी विश्वकप विजेताको हैसियतले सहभागी हुँदैछ।
रशिक्षक जोकिम लोले अर्को महिनाबाट सुरु हुने फिफा कन्फेडेरेसन कपको लागि युवा खेलाडीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर २३ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका छन्। विश्वकप विजेता टोलीका अधिकांश सदस्यहरुलाई अर्को वर्ष हुने विश्वकपका लागि मध्यनजर गर्दै विश्राम दिइएको जर्मन फुटबल फेडेरेसनले जनाएको छ।
आर्सनलका मेसुट ओजिलसँगै युभेन्टसका सामी खेडिरा, बोरुसिया डर्टमुण्डका मारको रीउस, जुलियन वाइगल लगायतका खेलाडीहरुले विश्राम पाएका हुन्। बायर्न म्युनिखबाट खेल्दै आएका थोमस मुलर, म्याट्स हमल्स, जेरम बोटेङ र म्यनुएल नोएरपनि टोलीमा परेका छैनन्। रियल म्याड्रिडबाट खेल्दै आएका मिडफिल्डर टोनी क्रुसलाई पनि विश्राम दिइएको छ।
यद्दपी प्रिमिएर लिगमा खेलिरहेका म्यानचेस्टर सिटिका लेरोए साने, आर्सनलका स्कोडरान मुस्ताफी र लिभरपुलका एम्रे च्यान भने टोलीमा परेका छन्।
गोलरक्षक: बर्न्ड लेनो, मार्क आन्द्रे टर स्टेगन, केभिन ट्रयाप
डिफेन्डर: माथियास जिन्टर, जोनास हेक्टर, बेन्जामिन हेन्रिक्स, जोसुआ किम्मिच, स्कोडरान मुस्ताफी, मार्भिन प्लाटेनहार्ट, एन्टोनियो रुडीगर, निकलस सुल
मिडफिल्डर: जुलियन ब्रान्ट, एम्रे च्यान, केरेम डेमिरबे, डिएगो डेम्म, जुलियन ड्रयाक्स्लर, लिओन गोरेट्जका, सबास्टिएन रुडी, लेरोए सानेम अमिन युनेस
फरवार्ड:लार्स स्टिन्डल, स्यान्ड्रो वाग्नर, टिमो वेर्नर